डिप्रेसन भनेको के हो? | बाइबल के भन्छ?
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उर्दू एफिक एस्टोनियन ओरोमो कन्नडा किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्रोएसियन क्षोसा गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टिग्रिन्या टेटन डिली डच डेनिश तामिल त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बुल्गेरियन भियतनामिज मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यानमार युक्रेनियन योरूबा रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन लिथुआनियन शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) सामोअन सिंहला सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
“म कुप्रिएको छु, र ज्यादै झुकेको छु, दिनभरि म विलाप गर्दै हिंड्‌छु।”—भजन ३८:६
अनुसन्धानकर्ताहरू के भन्छन्‌?
कहिलेकाहीं सबैलाई निराशाको बादलले छोप्छ। तर डिप्रेसन भनेको मन उदास हुनु मात्र होइन, यो एउटा रोग हो। यसले मानिसको दिनचर्यामा नै असर गर्छ। हामीले के कुरा पनि मनमा राख्नुपर्छ भने, कस्तो अवस्थालाई साधारण उदासीनता भन्ने र कस्तो अवस्थालाई डिप्रेसन भन्ने विषयमा विशेषज्ञहरूको धारणा फरक-फरक छ। तर जेहोस् हामी एउटा कुरामा भने सहमत हुन सक्छौं, कोही-कोही मानिसलाई नकारात्मक भावनाले असाध्यै पिरोल्छ र तिनीहरू आफूलाई अयोग्य अनि दोषी महसुस गर्छन्‌।
बाइबलमा नकारात्मक भावनाले पिरोलिएका थुप्रै पुरुष र स्त्रीहरूबारे बताइएको छ। उदाहरणका लागि, हन्ना “मनको ठूलो ताप लिएर उठिन्‌।” यस वाक्यांशलाई “मनमा ठूलो पीर” लिइन्‌ वा “साह्रै नै दुःखी” भइन्‌ भनेर पनि अनुवाद गरिएको छ। (१ शमूएल १:१०) एकचोटि अगमवक्ता एलिया असाध्यै निराश भए र मेरो ज्यान लिनुहोस् भनेर परमेश्वरलाई बिन्ती गरे।—१ राजा १९:४.
प्रथम शताब्दीका ख्रीष्टियनहरूलाई यस्तो निर्देशन दिइएको थियो, “जो निराश छन्‌, तिनीहरूसित सान्त्वनादायी कुरा गर।” (१ थिस्सलोनिकी ५:१४) एउटा पुस्तकअनुसार “जो निराश छन्‌” भन्ने अभिव्यक्तिले “जीवनमा भोग्नुपर्ने दबाबले गर्दा केही समय हतास भएकाहरूलाई” पनि बुझाउँछ। हो, बाइबल समयका विश्वासी पुरुष र स्त्रीहरू पनि कहिलेकाहीं निराश भए।
डिप्रेसन भएको मानिसको केही दोष छ?
“सारा सृष्टि अहिलेसम्म एकसाथ सुस्केरा हाल्दै पीडाले छटपटाइरहेको छ।”—रोमी ८:२२.
रोगबिमार भनेको प्रथम मानव दम्पतीको विरोधको एउटा फल हो। उदाहरणको लागि, भजन ५१:५ यसो भन्छ: “हेर्नुहोस्, म अधर्ममा उत्पन्न भएँ। र पापैमा मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरिन्‌।” अनि रोमी ५:१२ मा यसो भनिएको छ, “एकै जना मानिसद्वारा [प्रथम मानिस आदमद्वारा] पाप संसारमा प्रवेश भयो अनि पापद्वारा मृत्यु र यसरी मृत्यु सबै मानिसमा व्याप्त भयो, किनकि तिनीहरू सबैले पाप गरेका छन्‌।” हामी आदमको सन्तान भएकोले जन्मजातै त्रुटिपूर्ण छौं र हामीमध्ये जो-कोहीलाई शारीरिक र मानसिक रोगले पिरोल्न सक्छ। त्यसैले बाइबलमा भनिएअनुसार “सारा सृष्टि अहिलेसम्म एकसाथ सुस्केरा हाल्दै पीडाले छटपटाइरहेको छ।” (रोमी ८:२२) तर कुनै डाक्टरले दिन नसक्ने आशाबारे पनि बाइबलमा बताइएको छ। त्यो हो, परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको शान्तिमय नयाँ संसार। त्यहाँ डिप्रेसनलगायत सबै किसिमको रोगको नामोनिसान रहनेछैन।—प्रकाश २१:४.
डिप्रेसनको सामना कसरी गर्ने?
“टुटेका हृदय भएकाहरू सबैको नजिक परमप्रभु हुनुहुन्छ, र पश्‍चातापी मन हुनेहरूलाई उहाँले बचाउनुहुन्छ।”—भजन ३४:१८.
परिस्थिति सधैं तपाईंले चाहे जस्तो हुँदैन। तपाईं कहिलेकाहीं दुर्दशाको फेला पर्नुहुन्छ। (उपदेशक ९:११, १२) तर नकारात्मक सोचले आफ्नो जीवनलाई पूरै ठप्प पार्न नदिन तपाईंले व्यावहारिक कदम चाल्न सिक्नुपर्छ।
रोगीहरूलाई डाक्टरको खाँचो पर्छ भनेर बाइबल मानिलिन्छ। (लूका ५:३१) त्यसैले तपाईंलाई डिप्रेसन भएको छ भने डाक्टरको मदत लिनुमा केही खराबी छैन। बाइबलमा प्रार्थनाको महत्त्वबारे पनि जोड दिइएको छ। उदाहरणको लागि, भजन ५५:२२ यसो भन्छ: “तेरो भारी परमप्रभुमा राख्, र उहाँले तँलाई सह्माल्नुहुनेछ, र उहाँले धर्मात्मालाई कहिल्यै डग्नदिनुहुनेछैन।” प्रार्थना भनेको तपाईंको मानसिक समस्या निको पार्ने माध्यम होइन तर यो, “टुटेका हृदय भएकाहरू सबैको नजिक” हुनुहुने यहोवासित गर्ने कुराकानी हो।—भजन ३४:१८.
मन मिल्ने साथीलाई आफ्ना भित्री भावनाहरू पोखाउँदा पनि तपाईंले हल्का महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। (हितोपदेश १७:१७) डानियला नाम गरेकी एक जना यहोवाका साक्षी यसो भन्छिन्‌: “एक सङ्‌गी विश्वासीले मलाई आफ्नो डिप्रेसनबारे कुरा गर्न मनाउनुभयो। मैले वर्षौंदेखि यो विषयलाई पन्छाएकी थिएँ तर कुरा गर्न थालेपछि मैले सही गरिरहेछु भन्ने महसुस गरें। त्यसपछि आफै छक्क पर्नेगरि मेरो मन हल्का भयो।” (g13-E 10)
शेयर गर्ने शेयर गर्ने डिप्रेसन